Antsirabe: Olona miandry fitsarana, voarohirohy amin’ny halatr’omby indray
vendredi, 10 novembre 2017 08:15
Voatonotonona indray ny sampandraharahan’ny fonja amin’ny famoahana ireo olona voafonja na miandry fitsarana manao asa ratsy etsy sy eroa, eto Antsirabe.
Raha ny tranga nahoraka eran’Antsirabe mantsy dia nisy ny halatr’omby nitranga tany amin’ny Kaominina Ibity ny alin’ny talata 07 novambra lasa teo ka sarona tao am-balan’ny fianakaviana iray tao Verezambola ilay omby. Ny fanadihadiana nataon’iretsy farany avy eo no nahalalana ny anaran’ilay olona izay voalaza ho nametraka ireo omby ireo tao aminy tamin’io alarobia maraina io vao mangiran-dratsy.
Nitohy ny fanadihadiana ka tamin’izany no nahafantarana fa olona mbola miandry fotoam-pitsarana any am-ponja ity voatonotonona ity. Niara-namonjy ny fonja avy hatrany ny Zandary sy ilay raim-pianakaviana nahatrarana ireo omby halatra ka rehefa nojerena dia hita tao am-ponja ilay olona.
Nanamafy moa ny mponina manodidina ary nilaza fa mahita an’io lehilahy io mivezivezy eny an-toerana isan’andro ary tsy misy mahalala azy ho any am-ponja izany fa amin’izy ireo dia olon-tsotra mpamatsy hena amin’ireo fivarotan-kena eny Ambohimena isan’andro sy maka ny vidin-kenany amin’ireo toeram-pivarotana ireo isa-maraina no fahafantaranay an’ilay lehilahy, hoy ny filazan’ireo olona manodidina ilay toerana nahatrarana ireo omby sy ireo mpivarotra manodidina ireo toeram-pivarotan-kenan’ilay rangahy, satria voalaza fa manana fivarotan-kena ihany koa izy.
Nandà izany moa ny tompon’andraikitry ny fonja, Atoa Tsitakakatra Stéphane ary nanamarina fa io izy hitanareo io fa tsy marina ny filazan’ireo mponina fa mahita ity lehilahy ity eny an-tanana eny. Namafisiny fa mbola voarohirohy amina raharaha maloto izy ka tsy afaka mivoaka ny fonja.
Tsy nisy nambara moa ny teo anivon’ny Zandary satria mbola nilaza fa ao anatin’ny fanadihadiana lalina ary voalaza fa hangataka ny hamoahana ilay lehilahy mba hanaovana fanadihadiana ka efa eny amin’ny Fitsarana ny raharaha.